Qabsashadii Talyaanigu ee British Somaliland waxay ahayd olole milatari oo ka dhacay Bariga Afrika, kaas oo dhacay bishii Ogos 1940kii kaas oo dhex maray xoogaggii Talyaaniga iyo kuwii dhawr waddan oo Ingiriis iyo Barwaaqo-sooran ah. Socdaalkii Talyaanigu wuxuu qayb ka ahaa Ololihii Bariga Afrika.
Dawlada Ethiopia ayaa waxay qorshaynaysaa sidii ay u aqoon san lahayd somalailand. Bishii febraayo 1960kii ayaa wafdi uu hoggaaminaayo Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal u anbaxaxeen dalka Ingiriiska, waxaana heshiis ay la soo galeen dawladdii ingiriiska in Somaliland xirnimo buuxda lasiiyo. 26 Juun 1960kii bay markii maxmiyadii ingriiska ee Somaliland "British Somaliland protectorate" xornimadeeda ka qaateen dawladii Ingiriiska,sida aan la socono intii ka horraysay 01 Luulyo 1960kii Somaliland waxay ahayd dawlad gooniya( indepedent state). waxayna noqdeen dawlad madax bannaan oo la aqoonsan yahay ilaa 01 Luulyo 1960kii. Isla maalintaas Koonfurtu xorayday ayaa labada dal midoobeen inkastoo midawgaas mad madaw badani ku jiro. Dad badanina u haystaan in midowgaasi ahayn mid sharciya.
Bishii Luulyo1961kii waxaa dadka reer Somaliland gaashaanka ku dhufteen oo cod aqliyad ah ku diideen distoorkii qeexayey ee lagu sharciyeynaayey israaca labada dal ee Somaliya iyo Somaliland. Laakiin nasiib darro dawladdii markaas jirtay oo reer Koonfureedka ahayd waxay diideen inay aqoonsadaan maxsuulkii doorashadaas sababtoo maslaxad baan ugu jirin arrintan. Bishii december 1961 waxaa madaxdii ciidamada qalabka sida ee Somaliya isku dayeen inay dhigaan inqilaabkii dhicisoobay. Inqilaabkaasna waxay doonayeen inay kula soo noqdaan madaxbannaanidii luntay. 1967kii waxaa dalka ka noqday raysal wasaare Mohamed X.Ibrahim Cigaal. Halka uu madaxweynaha ka noqday Cabdirashid Cali sharmake. 15 Oktober 1969kii waxaa magaalada laascaanood lagu dilay madaxweynihii Jamhuuriyadda Somalida ee Cabdirashid Cali Sharmaake.
Oktober 1972kii waxaa lagu dhaqaaqay in la qoro Af-soomaliga oo uu noqdo luqadda rasmiga ah ee dalka.
1972kii-1975kii waxaa la qaaday ololihii barashada qorista Somaliga oo markii danbana isu rogay olalihii horumarinta reer miyiga ee la rabay in dadku waxna qoraan waxna akhriyaan. 1975kii waxaa la sameeyey 15 gobol oo cusub oo lagu bedelayeey 8 gobol ee hore u jiray. Waxaana ay ka koobnaayeen 78 degmo. Somaliland oo ka koobnayd 3 gobol looma samayn gobolo iyo degmooyin cusub toona. 1975kii Siyaad Barre wuxuu shaqadii ka eryey 50 saraakiil sare iyo madax ah oo badankooda ka soo jeeda Somaliland, waxaana uu ku bedelay dadka uu ku tuhmaayey inay taageersanyihiin kacaanka oo u badnaa caa'iladiisa ah.
M.s.bare wuxuu ku dhawaaqay inay raga iyo dumarku siman yihiin culimadii iyo dhalinyaradii kasoo horjeedsatayna laayay dhamaantood. 1977kii maamulkii siyaad Barre wuxuu weerar ku qaaday dalka Itoobiya, waxaana markii hore uu ku guulaystay dagaalkaas. Laakiin waxaa dagaalku dhamaaday markii ciidamo Ruush iyo Kuubaan ahi usoo gurmadeenItoobiya ee ay si toosa dagaalka usoo galeen. Waxaana ciidamadii Somaliya dibuga soo noqatay dhammaan dhulkii horuu qabsadeen.
Wixii ka dhacay Soomaaliya 1988 malaha waa ka sii foolxun. Markii Hargeysa la duqeeyay ayaa dadkii deganaa lagu khasbay inay qaxaan. Askarta ayaa markaas miinooyin ku aasay guryihii laga tagay. Markii uu dagaalku dhammaaday ayay qaxootigii dib u laabteen, balse waxaa lagu naafeeyay ama lagu dilay qaraxyo qarsoon.
Sida laga soo xigtay Abou Jeng iyo aqoonyahanno kale, xukunkii taliskii Barre waxaa lagu calaamadeeyay cadaadis arxan darro ah oo lala beegsaday qabiilka Isaaq. Max’ed Xaaji Ingiriis iyo Chris Mullin waxay caddeeyeen in qabqabashadii maamulkii Barre ee ka dhanka ahaa Dhaqdhaqaaqii Qaranka Soomaaliyeed ee fadhigiisu ahaa Hargeysa lala beegsaday beelweynta Isaaq oo ay ka tirsan yihiin inta badan xubnihii SNM. Waxay ku tilmaamayaan isku haynta inay tahay xasuuqii Isaaq ama xasuuqii Hargeysa. Baaritaan ay sameysay Qaramada Midoobay ayaa lagu soo gabagabeeyay in dambiga xasuuqa uu ahaa "mid ay maleegtay, qorsheysay oo ay ka fulisay Dowlada Soomaaliya dadka Isaaqa". Tirada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay waxaa lagu qiyaasaa inta udhaxeysa 50,000–100,000 sida laga soo xigtay ilo wareedyo kala duwan, halka wararka qaarna ay ku qiyaasayaan wadarta dhimashada dadka rayidka ah inay kor u dhaafeyso 200,000 oo rayid Isaaq ah. Dhimashooyinkaas, taliskii Barre wuxuu duqeeyey oo burburiyey magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya, Hargeysa iyo Burco siday u kala horreeyaan. Tani waxay u barakicisay dad lagu qiyaasey 400,000 oo dadka deegaanka ah oo u qaxay Hartasheikh ee dalka Itoobiya; shaqsiyaad kale oo gaaraya 400,000 ayaa iyaguna gudaha ku barakacay. Dagaalkii ka soo horjeedka ee taliskii Barre ee ka dhanka ahaa SNM wuxuu bartilmaameedsaday saldhigii rayidka ee kooxda mucaaradka, isaga oo isu beddelay xasuuq xasuuq ka dhan ah beesha Isaaq. Tani waxay horseeday fowdo iyo ololeyaal dagaal oo ay gaystaan ​​maleeshiyooyin kala jabay, ka dibna awooddii heer degmo la wareeray. Cadaadiskii maamulkii Barre kuma koobnayn Isaaqa oo keliya, maxaa yeelay wuxuu bartilmaameedsanayay qabaa’illada kale sida Hawiye. Taliskii Barre wuxuu burburay Janaayo 1991. Intaa kadib, markii xaalada siyaasadeed ee Somaliland xasiloonayd, dadkii barakacay waxay ku noqdeen guryahoodii, maleeshiyooyinkii waa laga daad gureeyay ama waxaa lagu daray ciidanka, tobanaan kun oo guri iyo meherado ahna dib ayaa looga soo dhisay burburka.
Afti dastuurka ayaa laga qaaday Somaliland 31 May 2001. Aftida ayaa loo qaaday dastuurka qabyada ah ee xaqiijinaya madaxbanaanida Somaliland ee Soomaaliya. 99.9% ee codbixiyaasha xaqa u leh ayaa kaqaybqaatay aftida waxaana 97.1% kamid ah ay ucodeeyeen dastuurka.
Waxa wadankan ka dhacay doorashooyin madax banaan oo shacabku si run ah ay u dooranayeen waxa kale oo horay uga dhacay somaliland doorashooyin doorashaddii, uguhoraysay ee kadhacady somaliland waxa ay hayd dheceen sanadii 1997 waxca ku gulaystay madaxwayne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal doorashada labaad ee kadhacady somalilad waxa ay dhacday sanadii 2003 halka tii sadexaad oo ah in ay jabisay rikoodhkii u yaaly afrika oo ahaaa in laba doorasho oo isku xiga wax kacadani aany wadan afrikaana kadhici iyada oo lagu yaqaanay in haddii doorasho sadexaad loodhaqaaqo uu wadankasta oo afrika kuyaala dagaal sokeeye ka bilaabmi jiray. ayaa wadanka somaliland waxa uu marayaa doorashaddii sadexaad ee si habsamiya uga dhacda doorashadan ugu danbaysay waxa ay djacday sandkii aynu soodhaafanay ee 2010ka waxaana madaxwayne loo doortay mujaaahidka wayn ee axmed maxamed maxamuud siilaanyo
Dawlada Ethiopia ayaa la filaayaa inay bisha tobnaad aad aqoonsato somaliland sida lagu baahiayay boga internetka ee ay dawaldu maamusho.
Isgaadhsiinta Somaliland Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland	Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland oo si rasmiya ugu Dhawaaqay inay Isu- Fureen Adeegyadoodii Taleefoonada iyo Madaxweyne Ku-xigeenka oo ka qayb galay Xafladii lagu Daah-furay.
Munaasibada lagu Daahfurayay Isku-xidhka Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland ayaa lagu qabtay Hoteelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa.
Xafladan oo lagaga dhawaaqay isku-xidhka shan Shirkadood oo ka mid ah Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland oo kala ah Somtel, Nation Link, Telcom, Soltelco, African Online., waxa ka qayb galay Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan Saylici, Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Axmed Xaashi Oday, Wasiirka Diinta iyo awqaafta Sh. Khaliil C/laahi, Maareeyaha Hawlaha shaqada ee Shirkadda Somtel Cali Saalax Cabdi, Mahdi Daahir Jaamac oo ah Maareeye ku-xigeenka Shirkadda Nation-link, Madax Shirkada Telcom Aadan C/laahi, Mareeyaha Shirkada Soltelco Mukhtaar Osman iyo Marti sharaf kale.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/lahi Ismaaciil oo Munaasibadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isku xidhka shirkadahan isgaadhsiinta oo wax badan ka tari doona dhibaatooyinkii Bulshada ka haysatay dhinaca Isgaadhsiinta, gaar ahaan wada hadal la’aanta dadka isticmaalada adeegyada kala duwan ee Shirkadaha Isgaadhsiinta. Waxaanu yidhi “Runtii waxa maanta Farxad ii ah inaan ka soo qayb galo, isku xidhkii shirkadaha Isgaadhsiinta oo runtii baahi weyn loo qabay inaynu ku wada xidhiidhno, iyadoo laga maarmayo sadexdii Telefoon iyo afartii Telefoion ee markii hore la sitay, arintan oo runtii ka mid ahayd balanqaadyadii Xisbiga Kulmiye ee in adeegyada Bulshada la mideeyo”.
Mr. Saylici isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay “Maanta waxaan ku faraxsanahay in talaabada koowaad ee la qaaday inteedii badnaydna Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiintu halkan ka sheegay , shirkadaha laftoodiina ay ka marag kaceen, muhiimada aynu u soconaana waxay tahay inaynu shacbigeena u wada adeegno oo aynu ka saarno qoqobkii ku kala jiray ama kala xidhnaantii ku kala jirtay ,maadaama oo suuqeenu yahay suuq mid xor ah, waxaan qabaa inaanu dawladu mar walba ka madhnayn shirkadaha isgaadhsiinta oo waxa loo sameeyaa Cashuur dhaaf”.
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Axmed Xaashi Oday oo Munaasibadaasi ka hadlay ayaa sheegay sheegay in Wasaarada Boosaha iyo isgaadhsiintu si isku mid ah u maamuli doonto iska Xidhka Shirdahan adeegyadooda Xidhiidhka laysku furay, isagoo hoosta ka xarriiqay inay si caadalad iyo sinaan ah ay u ilaalin doonaan dhamaan shirkadahan xuquuqdooda Ganacsi iyo sirta Adeegyadooda. Guddoomiyaha Guddidii ka soo shaqaysay isku xidhka shirkadahan Isgaadhsiinta ee mideeyay Adeegyadooda Isgaadhsiinta Mr: Jaamac X. Maxamed Cigaal ayaa isna munaasibadaasi ka sheegay qaabka ay dadku ugu wada Xidhiidhayaan shanta shirkadood ee laysku xidhay, waxaanu halkaasi ku soo.
Soomaali luqadda dhegoolaha
Dilla Press Archived Oktoobar 24, 2020 // Wayback Machine
ToosNews Archived Febraayo 1, 2022 // Wayback Machine
↑ "Issue 270, 28 March 2016". Waxaa laga kaydiyay the original 21 March 2016. Soo qaatay 26 July 2016. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ Somaliland Geography, 28 March 2016
↑ REPORTER, I. (2012, September 18). As Somalia Struggles, Can Neighboring Somaliland Become East Africa's Next Big Commercial Hub? Retrieved December 26, 2015, from http://www.ibtimes.com/somalia-struggles-can-neighboring-somaliland-become-east-africas-next-big-commercial-1407582">As Somalia Struggles, Can Neighboring Somaliland Become East Africa's Next Big Commercial Hub?, International Business Times, 2013
↑ Land Mines—Weighing the Cost
↑ "Nuqul Archive". Central Intelligence Agency. 14 May 2009. Waxaa laga kaydiyay the original 1 Bisha Todobaad 2016. Soo qaatay 31 May 2009. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Hubi qiimaynta taariikhda: |archive-date= (caawin)
↑ "Nuqul Archive" (PDF). Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 2017-08-16. Soo qaatay 2020-06-20. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ Buugag iyo Qormo Dhigashada…
Shaambada Boostada British Somaliland
Ololihii Somaliland (1920)
Dagaalkii Talyaaniga ee Somaliland
Ciidankii Geela Somaliland
Madaxwayne kuxigeen Somaliland
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soomaaliland&oldid=235359"
Bogag leh khaladaad xigasho Archiveurl
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 May 2022, marka ee eheed 22:40.